Free Agent ဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ ဒီယေဂိုကော်စတာရဲ့ ခိုနားရာက ဘယ်အသင်းဖြစ်လာနိုင်သလဲ ??? – MySport Myanmar
Free Agent ဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ ဒီယေဂိုကော်စတာရဲ့ ခိုနားရာက ဘယ်အသင်းဖြစ်လာနိုင်သလဲ ???
အသက်လက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းကတော့ စာချုပ်သက်တမ်း မကုန်ဆုံးခင်မှာပဲ သူတို့အသင်းကနေ ထွက်ခွာသွားချင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ ဝါရင့်တိုက်စစ်မှူးကြီး ဒီယေဂိုကော်စတာရဲ့ စိတ်ဆန္ဒကို လိုက်လျောပေးခဲ့ပြီး သက်တမ်း(၆)လနီးပါးလောက် ကျန်ရစ်နေသေးပေမယ့် စာချုပ်ဖျက်သိမ်းပေးလိုက်တာကြောင့် အခုဆိုရင် ကော်စတာဟာ အသင်းလက်မဲ့ ဖြစ်သွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပြီး သူစိတ်တိုင်းကျ ကလပ်အသင်းတစ်သင်းဆီကို ပြောင်းရွှေ့နိုင်တော့မှာဖြစ်လို့ သူရဲ့အသင်းသစ်က ဘယ်အသင်းများ ဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာကို သုံးသပ်သွားချင်ပါတယ်။
ကော်စတာနဲ့ အသက်လက်တီကိုတို့ စာချုပ်မဖျက်သိမ်းခင်မှာပဲ ကော်စတာကို ခေါ်ယူသွားဖို့ အာဆင်နယ်ဘက်ကနေ စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ကျင်လည်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကော်စတာကို နည်းပြအာတီတာကနေ စိတ်ဝင်စားလို့နေပြီး အခုဆို အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ပါ ခေါ်ယူနိုင်မှာဖြစ်လို့ ပိုပြီးအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
နည်းပြမော်ရင်ဟိုရဲ့ စပါးအသင်းကလည်း ကော်စတာကို စောင့်ကြည့်နေမှာ သေချာပါတယ်။ ဟယ်ရီကိန်းရဲ့ အရန်တိုက်စစ်ကစားသမားနေရာအတွက် တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးကို ထပ်မံအလိုရှိနေသေးတဲ့ မော်ရင်ဟိုဟာ ကော်စတာလို အတွေ့အကြုံရင့် ကစားသမားတစ်ယောက်ကို အသင်းဆီ ခေါ်ဆောင်သွားဖို့ သေချာပေါက်ကို စိတ်ဝင်စားလို့နေမှာပါ။
တိုက်စစ်မှူး ရာအူးယီမီနက်ဇ် ပြန်မကစားနိုင်သေးတဲဲ့အချိန် တိုက်စစ်အား ထိုးကျသွားတဲ့ ဝုလ်ဗ်ကလည်း တိုက်စစ်ပိုင်းကို အင်အားဖြည့်တင်းတဲ့အနေနဲ့ ကော်စတာကို ခေါ်ယူချင်နေမှာ အမှန်ပါပဲ။ ကွင်းလယ်ပိုင်းက လုပ်အားနှုန်းကောင်းတဲ့ ဝုလ်ဗ်လို အသင်းမျိုးကို ကော်စတာရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့ သူ့အတွက်လည်း ပွဲထွက်ကစားခွင့်တွေ ဂိုးသွင်းခွင့်တွေက ပိုမိုမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပေမယ့်လည်း မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်း ပြောလို့ကို မရနိုင်ပါဘူး။ တကယ်လို့ ဆောင်းစျေးကွက်မှာ ဂျရူးကို လက်လွတ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင် ချယ်လ်ဆီးအနေနဲ့ အသင်းသားဟောင်း ကော်စတာကို အသင်းဆီ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်နိုင်သေးတာကိုတော့ မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ သူကလည်း ကွန်တီနဲ့ပဲ အဆင်မပြေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ချယ်လ်ဆီးနဲ့တော့ ဘာပြသာနာမှ မရှိထားတဲ့အတွက် နေရာဟောင်းကို ပြန်လာနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သူသာ ချယ်လ်ဆီးကို တကျော့ပြန်များ ရောက်လာမယ်ဆိုရင် ချန်ပီယံလိဂ်မှာ အသက်လက်တီကိုနဲ့ ပြန်လည်ရင်ဆိုင်ရမှာပါ။
MySport Myanmar2020-12-30T15:07:46+06:30December 30th, 2020|All Posts, Football, La Liga, Premier League|